Singapore - Malaysia (7Days6Nights)KH-7000 A
Day :2USS & Wings of time show (Breakfast, Lunch & Dinner)
ဟိုတယ်တွင် နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး အကြီးဆုံးစိန်ထည်လုပ်ငန်းကိုသွားရောက်လေ့လာပါမည်။ ထုိုမှ Collagen Product ရောင်းဝယ်ရေးသို့သွားပြီး ဆက်လက်ကာ Universal studio သို့သွားပါမယ်။ နေ့လည်စာအား Universal studio ရှိ Food court တွင်သုံးဆောင်ပြီး ညနေတွင် Sentosa ရှိ နာမည်ကျော် “Wings of times” show ကိုကြည့်ရှုကာပြီးလျှင် Buffet ညစာဖြင့် ဧည့်ခံပါမည်။
Day :3Garden By the Bay (Breakfast, Lunch & Dinner)
နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးလျှင် Garden By the Bay လှပလှသော Flower Dome & Cloud Forest Dome တို့ အားသွားရောက်လည်ပတ်ကြပါမည်။ ပြီးလျှင် နေ့လည်စာကို ကိုးရီးယား BBQ hotpot သုံးဆောင်ကာ Trick Eye Museum သို့သွားရောက်လည်ပတ်ဓာတ်ပုံများရိုက်ကြပြီးလျှင် Vivo city တွင်ဈေးဝယ်ကြကာ ညစာအား စင်္ကာကြက်ဆီထမင်းသုံးဆောင်ကြပါမည်။
Day :4Singapore – Johor - Malacca (Breakfast, Lunch & Dinner)
နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး လျှင် ဟိုတယ်မှထွက်ကာ အလွန် သက်တောင့်သက်သာရှိသော ကားကြီးများဖြင့် မလေးရှားသို့ ဂျိုဟောမှတဆင့် ထွက်ခွာကြပါမည်။ နေ့လည်အား လမ်းတွင်းသုံးဆောင်ပြီး မလကာမြိ့သို့ရောက်ရှိပါမည်။ မလကာ မြို့ ဟောင်းလေးတွင် စိတ်ဝင်စားစရာ ဓာတ်ပုံရိုက်စရာ နေရာလေးများရှိပါသည်။ မလကာတွင်အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :5Malacca – KL - Genting (Breakfast, Lunch & Dinner)
နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး မလေးရှားနိုင်ငံ ရဲ့မြို့ တော်ဖြစ်တဲ့ ကွာလာလမ်ပူမြို့ သို့ ရောက်ရှိကာ ဂျန်တင်း တောင်ပေါ်မြို့  သို့ သွားကြပါမည်။ တောင်ပေါ်သို့ ရာသီဥတုအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ကားဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ Cable car ဖြင့်သော်လည်းကောင်းတက်ကြပါမည်။ ဂျန်တင်းမြို့  လေးသည် စင်္ကာပူ နိုင်ငံ၏ အသွားအများဆုံးအပန်းဖြေမြို့  လေးဖြစ်ပြီး အေးမြလှသောရာသီဥတု အပြင် ကစားကွင်း၊ Casino များရှိသောကြောင့် အလွန်ပျော်စရာကောင်းလှပါသည်။ ဂျန်တင်းတွင် ညစားသုံးဆောင်ပြီး အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
Day :6KL – Sea Aquaria - KLCC (Breakfast, Lunch & Dinner)
နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီး ကေအဲလ်သို့ ပြန်ကာ KLCC ရှိ Sea Aquaria သို့သွားရောက်လည်ပတ်ကြပြီး နေ့လည်စာသုံးဆောင်ကြပါမည်။ ပြီး လျှင် မြို့ထဲအားကားဖြင့်လည်ပတ်ကြည့်ရှုကာ ဓာတ်ပုံများရိုက်ကြပါမည်။ ပြီးလျှင် KL တွင်ညစာ သုံးဆောင်ပြီး ညကား (သို့) နောက်နေ့ နံနက်အစောဆုံးကားဖြင့် စင်္ကာပူသို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာပါမည်။
Day :7Singapore Departure
နေ့လည်စာသုံးဆောင်ကာ လေဆိပ်သို့ ဆင်းပြီး ပြန်ကြာပါမည်။
1.	ရန်ကုန်မှ စင်္ကာပူအသွားအပြန်လက်မှတ်ခ နှင့် စင်္ကာပူ မလေးရှားကားခ
8.	Malaysia Visa fees